माकुराको जालो धेरै भो, तोड्दै हिड्दैछु
६५५० पटक पढिएको
सुनसरी । इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर द्धवारीकलाल चौधरी निर्वाचनका बेला भन्थे —“ खोला खोलामा डोजर कुदाँउछु ।”निर्वाचन जितेपछि डोजर चलाउन त खोजे तर फेरी पछि हटे । उनले निर्वाचनका बेला कर्मचारीको सेवा प्रवाहप्रति लक्षित गर्दै भन्थे मेयर भएपछि चुट्कीको भरमा तह लगाँउछु । तर अहिले तिनै कर्मचारीका कारण उनी उपमहानगरमा घेराबन्दीमा परेका छन् । उनले निर्वाचनका बेला सवैलाई मिलाएर लैजाने पनि भन्थे तर अहिले उप महानगरका अन्य जनप्रतिनीधिसँगको सम्बन्ध समेत चिसो भएको आम सेवाग्राहीले थाहा पाइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर इटहरीको विकास र समृधीमा परिरहेको छ । बेला बेलामा चर्चा र विवादमा आइरहने मेयर द्धवारीकलाल चौधरी सञ्चारपाटीको कठघरामा आज यीनै प्रश्नको सेरोफेरोमा उभिएका छन् । सिधा र स्पस्ट जवाफ दिने वाचा सहित कठघरामा उभिएका मेयर चौधरीसँग पत्रकार सुमन पुरीले विवाद र चर्चामा रहेको इटहरीको जनतापार्कको प्रसंगबाट संवादको थालनी गरेका छन् ।
जुटविकास र रेशम खेती छेउमा रहेको ३ विगाह सर्वाजनिक जग्गाको गत बर्षदेखि नै यसको यसको स्थीती के हो खोजी गरिरहेका थियौ । अध्ययन अनुसार सो जग्गामा सावीकमा टेंग्रा खोला बग्दो रहेछ । उच्चस्तरीय वन सुधृढीकरण आयोगले १३ बिवाह जग्गा मध्ये तीन विगाह जग्गा कसैको नाममा कित्ता काट गर्न सिफारीस गरेको थियो । तर कुनैपनि व्यत्तीको नाम उल्लेख गरेको थिएन । त्यसैले कसैको नाममा जग्गा दर्ता हुन सकेन । हामीले पूर्वी शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत पूर्वाञ्चल स्तरीय एउटा सभागृह बनाउने माग गरेका थियौ । यसमा शहरी विकास मन्त्रालयले डिपीआर पनि तयार पारेको थियो । त्यसको लागत मूल्य ४० करोड आएको थियो । त्यती बजेट तत्कालको अवस्थामा कहि कतैबाट जुट्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसो भएकाले सार्वजनिक हितमा कसरी प्रयोग गर्ने त ? इटहरीको जुन बजारीया जीवन शैली छ । उनीहरुका लागि पार्क बनाउनु पर्ने निर्देशन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । यही निर्देशनलाई टेकेर शुरुवात यहीबाट गरेको हो । उपमहानगरले पार्क बनाउनका लागि यस बर्ष बजेट पनि बिनियोजन गरिसकेकाले कसैको नाममा नहरको जग्गामा पार्क बनाउने निर्णय गरेका हौ । शुरुमा हामीले पार्क इटहरी वाडानम्बर ५ मा बनाउने भनेका थियौ । त्यो जग्गाको कानुनी जटिलता टुंगोमा नपुगेकाले हामीले ५ बाट सारेर पार्क ९नम्बर वाडामा ल्याएका हौ ।
यति महत्वपूर्ण बिषयको निर्णय किन गुपचुपमा गरियो ? जिज्ञासामा मेयर द्धवारीकला चौधरीले भने हो हामीले छापामार शैलीमै काम गरेको हो । सल्लाहा गरेको भए जनता पार्क सहिद पार्कमा परिणत हुने वाला थियो ।मैले टप सेक्रेटमा योजना शाखालाई जनतापार्कको योजना बनाउन निर्देशन दिएको थिए ।तर समयमा योजना शाखाले योजना बनाउन सकेन । जसले यो जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो त्यो जग्गा इटहरीका प्रतिस्ठीत भनाँउदाहरुको थियो । माफियाहरु थिए डनहरु थिए । उनीहरुले अनेक खाले लोभ लालच र प्रभाव पार्न खोजेका थिए ।त्यसैले मैले कर्मचारीलाई भनेको थिए —“यु मे भी किडन्याप,यु मे भी सुटेड । आई मे वी किडन्याप,आइ मे वी सुटेड ।” उनले भने जनतापार्क शिलान्यास गर्ने बेलामा हामीलाई अपहरण सम्मको धम्की आएको थियो । यतिमात्रै होइन केहि मान्छेहरु हत्या गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेका थिए । जनता पार्कको योजना बनाउने कर्मचारी समेत सहिद हुन तयार हुनु परेको अवस्था थियो । यो कुरा हामीले राम्ररी थाहा पाएका थियौ । सार्वजनिक जग्गा हडप्न अहिले सवै राजनीतिक दलका नेताहरु,यहाँका प्रतिस्ठीत समाजसेवी भनाउँदाहरु लगिपरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक जग्गा उपमहानगरको स्वमित्वमा ल्याउन समस्या छ । यहाँ सम्मकी आप्mनै कोर टिमबाट पनि यो बिषयलाई अगाडी बढ्न नदिने अवस्थामा छन् ।यसैले हामीले छापामार शैलीमै काम गरेका हौ । इटहरीको मुटुमा रहेको जग्गा हडप्न लागेकाहरु र केहि भू माफियाहरुले शक्ति केन्द्रसम्म पुगेर जसरी भएपनि रोक्न खोजिरहेका थिए । यो बिषय उप महानगर भित्र मात्रै होइन आप्mनै पार्टी भित्रपनि चलखेलको बिषय भइरहेको थियो । हाम्रो पार्टीमा पनि सवै दुधले नुहाएकाहरु छन् र ? उनले प्रश्न गरे यहाँ पैसाको पछाडी जे पनि गर्नेहरु छन् । त्यसैले मैले कतिपय ठूला योजनाहरु छापामार शैलीमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छु । अव छापामार शैलीका योजनाहरु एकपछि अर्को सार्वजनिक हुने छ । यसपछि उनले एउटा सायरी सुनाए “वर्वादे गुलिस्ता कर्नेके लिए एकै उल्लू काफी हे ।”
यति सुनेपछि हामीले प्रश्न गर्यौ यहाँलाई त सवैतिरबाट घेराबन्दै रैछ होइन ? उनले महाभारतको स्वर्ग जाने प्रसंग शुरु गरे । उनले स्वर्ग जाने बेलामा युधिस्ठीर एक्लै भएको भन्दै आफू अहिले एक्लै भएको बताए । तर आफू सत्यको पथमा हिडेको भन्दै सत्यकै जित हुने दावी गरे । उनले पार्टी भित्र र बाहिरको घेराबन्दीलाई माकुराको जालो बताए । उनले भने इटहरीको विकास र समृधीको बिरोधमा माकुराको जालो लगाइएको छ । भैसी हिड्न थालेपछि माकुराको जालोको कुनै अर्थ हुँदैन । अहिले त्यही भइरहेको छ । उनले जालो लाउनेको नाम नभन्ने बताए । समयक्रम आएपछि ती नाम आफै सार्वजनिक हुने दावी समेत गरे । उनले जनप्रतिनीधि कै बिचमा द्धन्द्ध भएको र यही द्धन्दले विकास हुने बताए । तर नकारात्मक द्धन्द्धले बिनाश गर्ने समेत बताए । कहाँबाट द्धन्द शुरु भो ? जिज्ञासामा भने —“सवैले जनता भन्छन् । जनताकै नामबाट गरिरहेका हुन्छन् ।” तर केहि मान्छे सिमित स्वार्थकालागि काम गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो पार्टीभित्र पनि सिमित स्वार्थका लागि काम गर्नेहरु धेरै भए । निर्वाचित भएका सवै जनप्रतिनीधि दुधैले नुहाएका छैनन् । हाम्रो त माइनुट लेख्दाखेरी नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने प्रचलन पनि शुरु भइसक्यो । पहिला उप मेयरले लेख्नु भो । त्यसपछि वाडा अध्यक्षले लेख्नु भो । अव त जुन दिन कार्यपालिकाको बैठक बस्छ त्यही दिन माइनुट प्रमाणित गरिदिन्छु र कसैलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु छ भने लेख्नुस भन्छु । त्यस्तो अवस्था सम्म छ । कार्यपालिकको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन बैठकलाई सहजिकरण गर्नका लागि वैठक बस्नु पर्ने भएको छ ।
मेयर र उप मेयरको द्धन्द
सिंगो कार्यपालिकाले एक मत ले निर्णय गर्छ । तर २ दिनपछि कसलाई के लाग्छ आप्mनो व्यबहार देखाइ हाल्छ । एउटा कर्मचारीले चेक इस्यु नगरेको बिषय हेर्दा जति सरल छ तर बिषय गम्भिर छ । कार्यदलले भुत्तानी गर्न सिफारीस गर्यो । प्रतिवेदन दियो । सिंगो कार्यपालिकाले एक मतले काम भएको हो । भुत्तानी दिन आवश्यक छ भनेर निर्णय गर्यो । तर एक जना कार्यापालिकाको सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भो । अनि कर्मचारीले चेक इस्यु गरेन । यो किन गरेको भनेर त्यही सदस्यलाई सोध्नुहोस । यदि मैले भ्रष्टचारलाई मैले प्रोत्साहान गरेको भए अख्तियारमा मुद्या हालेको भए भै हाल्थ्यो नी । म यस्ता सयौ मुद्या अख्तियारमा खेप्ने ताकत राख्छु । यदि कसैले मेयर भ्रष्टचारी हो भनेर प्रमाणित गर्छ भने जीन्दगीभर उसका घरमा गुलाम बसिदिन्छु । दुई जनाको द्धन्दले इटहरीको समृधी पछि धकेलिने भो ? किन सम्बन्ध सुधारमा लाग्नु हुन्न ? उनले थपे म सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।विगतको पाठबाट म सकारात्मक हुन खोजिरहेको छ । तर आजकाल के भन्न थालेको छु भने “तेले तेलम् खले भूमी ।”
कर्मचारीको हिसाब शुरु भो
मेयरले कसैसँग सल्लाहा गरेन भन्छन् । कसरी सल्लाहा गर्ने ? को सँग सल्लाहा गर्नु ? पार्टी भित्र त्यही प्रवृती छ । कार्यपालिकामा त्यही प्रवृती छ । यो कुरा म भन्दै हिडुम् ? मैले सिस्टम सवै बुझेको छु । जसलाई विश्वास गर्यो उही माफियासँग मिलिसकेको हुन्छ । त्यसैले मैले भन्न थालेको छु माकुराको जालोले भैसीलाई के गर्छ ? म अव समदुरीमा बसेर काम गर्छु । यहाँ कर्मचारीलाई समेत म विरुद्ध भड्काउने काम भएको छ । जनताको करबाट तलब भत्ता बुझेका कर्मचारीलाई भड्काउने यो कस्तो तरिका हो ? कर्मचारीलाई भड्काएर नगरपालिकाले अगाडि बढाएको काम रोक्छु भनेर दिवा सपना नदेखे हुन्छ । यस्ता कर्मचारीको पनि मैले हिसाब शुरु गरिसकेको छु । त्यस्तो खेल गर्नेहरुलाई कारवाही हुन्छ । मैले भनेकै हो १७ बर्ष जनप्रतिनीधि नहुँदा कर्मचारीले चलाएको नगरपालिकाको सिस्टम सच्याउछु भनेर । अहिले कार्यदल बन्दैछ । कर्मचारीको व्यत्तिगत फायल,कार्यक्षमता दक्षता जाँच हुन्छ । कसैले झुक्याएर जागिर खाएको रैछ भने अव त्यो मौका दिइने छैन । राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर कोहि नगरपालिकामा जागिर खाइरहेको छ भने त्यसले राजिनामा दिए हुन्छ । राजनीतिक दलले त्यस्ता कर्मचारीको जागिर जोगाउन सक्दैनन् ।